(MUUQAAL): Falastiiniyiinta oo Abiteey ololaysa ku gubay Beero ku yaalla Yuhuudda. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kadib, sannado badan oo ay dadka Reer Falastiin dhagxaan kula dagaalami jireen Askarta caddowga Yuhuudda ayaa waxay haatan bilaabeen xeellado cusub oo ay kula dagaalamaan Askarta Yuhuudda.
Dagaalamayaasha Reer Falastiin waxay hindiseen inay samaystaan Madaafiic ay ku weerari karaan dhulka Yuhuudda, waxayna taasi cabsi ku beertay dadka Yuhuudda ee la dejiyey dhulalka Falastiin.
Sidoo kale, Dhallinyaradda Reer Falastiin waxay waayadan dambe bilaabeen inay Abtiyeyda ay carruurta hawada u diraan u adeegsadaan sidii Hub oo kale, waxayna Abiteyda ku xiraan dhalooyin ololaya, suuf iyo isbuunyo iyo dhalooyin ay Baasiin ka buuxiyeen, kadibna ay u sii daayaan dhinaca dhulka Yuhuudda.
Maalmihii la soo dhaafay, waxay Askarta Yuhuudda soo weriyeen dhowr dhacdo oo ay Falastiiniyiinta waxyeello ku geysteen Deegaanadda ay dadka Yuhuudda deggan yihiin.
Saraakiisha Milliteriga Yuhuudda waxay sheegeen inay ka fekerayaan sidii loo samayn lahaa Diyaarado Drones oo looga hortago Aabiteyda iyo Baallooniska ololaya ee ay Falastiiniyiinta la soo beegsadaan dadka Yuhuudda ee xoogga lagu dejiyey dhulalka la-haysto ee Reer Falastiin.
Oday Yuhuudi ah oo ka mid ah Beeraleyda deggan Deegaanka Kibbutz Nir Am waxa uu sheegay inay dhibaato ku qabaan Abiteyda ololaysa ee ay Falastiiniyiinta hawada soo mariyaan,
Odaygaasi oo lagu magacaabo Itzik Ebbo, oo 78-jir ah waxa uu Suxufiyiinta u sheegay inay waxyeello soo gaareen Abuurki ku beernaa beerahooda, isla markaana ay jiraan dhul-kaymeed badaan oo lala beegsaday Abiteyda ololaysa ee ay dadka Falastiin ugu dagaalamaan sidii Diyaaradaha Dagaalka.
Maamulayaasha Yuhuudda waxay qireen inay Aabtiyeda Falastiiniyiin sababeen inay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay dhacaan in ka badan 450 dab, iyadoo uu dab qabsaday dhul-beereed cabirkiisu dhan yahay 2,800 Hektaris iyo khasaaro dhan 2 million oo Dollar.
30 Askari oo lagu dilay weerar ka dhacay Afganistan.